‘पूर्वलडाकू’ कुँवरको फेरिएको परिचय - नेपालबहस
◊ खेमराज गौतम
१६ साउन, गलकोट । भनिन्छ– ‘सङ्घर्षले मानिसलाई जीवन जिउन सिकाउँछ ।’ बागलुङ गलकोटका सूर्य कुँवरले सानै उमेरमा सङ्घर्ष रोजे । त्यसैले होला ३० वर्षीय कुँवरको जीवनमा ठूलै उतार चढाव आइसकेको छ । तर गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीका कुँवर जस्तोसुकै दुःखमा पनि विचलित भएनन्। न्याय र समानताको लडाइँ लड्ने भन्दै १४ वर्षकै उमेरमा दुदिलाभाटीको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत कुँवर तत्कालीन माओवादीद्वारा शुरु सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिए । सबैको समान आर्थिक हैसियत र सामाजिक न्याय हुने भनिएपछि कुँवरको मनमा पनि विद्रोहको भाव ल्याइदियो । यसकारण उनी नयाँ क्रान्तिका लागि जङ्गल छिरे । तत्कालीन नेकपा माओवादीमा सक्रिय भएर जनुयद्व लडेका कुँवर जनमुक्ति सेनामा सक्रिय हुन् ।
धेरै स्थानमा भएको आक्रमणका क्रममा उनी एक योद्धाको रुपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । युद्वका सुखद, दुःखद र सङ्घर्षका अनेक पाटाहरु अहिले पनि उनको सम्झनामा छन् । त्यसताका एक योद्धा बनेर हतियार चलाएका कुँवरका हात अहिले आफ्नै गाउँघरको कृषि कर्ममा समर्पित छन् । प्रायः पुराना दुःखका कहानी कसैलाई सुनाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उनलाई । त्यसैले उनी ती विगतका कहानी विर्सने प्रयासमा छन् । “हामीलाई सानै उमेरमा न्याय र समानताको सिद्धान्त रटाइयो, बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य गरी व्यावहारिक शिक्षा ल्याउनुपर्छ भनियो” कुँवरले पुराना दिनहरु सम्झँदै भने “समानताका लागि जनयुद्धमा होमिएको म पछि आफैँ अपहेलित भएर निस्कनु प¥यो, त्यसैले पनि ती पुराना दिन सम्झिन म चाहन्नँ ।”
विसं २०६२र०६३ को जनआन्दोलन पश्चात माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टमै एसएलसी पास गरेका कुँवरको उच्च शिक्षा पढ्ने सपनासमेत अुधरै रह्यो । सेना समायोजनको समयमा जनमुक्ति सेनामा रहेका कुँवरलाई उमेर नपुगेको भन्दै ‘अयोग्य लडाकु’ घोषणा गरियो । जातीय, वर्गीय, लैंगिक, आर्थिकलगायत सबै किसिमको समानता रहने राज्यको परिकल्पना थियो कुवँरको मनमा । तर ज्यानको बाजी लगाएर होमिनुभएको उनको सपना सात वर्षमै तुहियो । समय क्रमले झनभन्दा झन पछि परेको महसुस उनलाई भयो ।
“सानै उमेरमा कैयौँ सपना बाँडेर जनयुद्धमा सामेल गराएको माओवादीले अयोग्यको बिल्ला भिराउदै रु १० हजार दिएर बिदाइ ग¥यो” जीवनकै नमिठो अनुभव भएको कुँवरले सुनाए “हिम्मत हारिन, शिर ठाडो बनाएर गाउँ फर्किएँ, तर लगानीको समस्या भो । अनि कृषिमा लगानीको जोहो गर्न परदेश भासिएँ ।” दिइएको रु १० हजारसमेत नलिने भन्दै उनले तत्कालै फिर्ता गरेर गाउँ फर्केको बताए । उनलाई अब समाजमै घुलमिल हुन आफ्नो मनले नै प्रेरित ग¥यो र गाउँ फर्किए ।
द्वन्द्वमा होमिदा यसरी परदेश भासिनुपर्ला भन्ने कल्पना सम्म नगरेको कुँवर बताउछन् । तर परदेशिनुको विकल्प नभएपछि अनुभव उनले सुनाए। अयोग्यको बिल्ला मेट्नै भए पनि विदेशिएको उनको तर्क छ ।
उनी छ वर्ष मलेसिया बसेर स्वदेश फर्किए र अहिले पुनः गाउँ फर्किएर व्यावसायिक कृषि कर्ममा सक्रिय भएका छन् । तीस वर्षको उमेरमा अनेकौ दुःख कष्ट भोगेका कुँवरले दुदिलाभाटीको भाटी बजारमा डेढ वर्ष अघि पाँच रोपनी जग्गा खरिद गरी एकिकृत अमृता सनसाइन कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनको फर्ममा दुई हजार सिल्भर, कमन र ग्रास जातका माछा र तीन हजार रेन्बो ट्राउट माछा, कुखुरा पालन शुरु गरेका छन् । उनीले फर्ममा १० बङ्गुर र मिश्रित कृषि खेती गर्दै आएका छन् । उनको फर्ममा एक ग्रिन हाउस र दुई टनेल रहेका छन् । टनेलमा गोलभेडा, ब्रोकाउली, बन्दा लगायतका बेमौसमी र मौसमी तरकारी लटरम्म छन् । अयोग्यको बिल्ला मेटाउनका लागि र लगानीको जोहो गर्न विदेशिएका कुँवरलाई मलेसियामा कृषि कर्मले झनै कृषिको अनुभव सिकायो ।
“मलेसियामा छ वर्ष कृषि कर्ममै बिताएँ र धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएँ”, उनले भने “विदेशमा सँगालेको अनुभव र सीपलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने अठोटका साथ कृषि कर्ममा लागेको हुँ ।” फर्मका लागि जग्गा खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि झण्डै ६० लाख लगानी गरिसक्नुभएका युवा व्यवसायी कुँवरले फर्म नजिकै रिसोर्ट खोल्ने योजना रहेको बताएका छन् । उनले उत्पादन गरेका् बङ्गुर तथा तरकारी गलकोट नगरपालिकाको सदरमुकाम हटिया बजारमा खपत हुने गरेको छ भने माछा उत्पादनको परीक्षणमै छन् । उत्पादन गर्न सके बजारको समस्या नभएको भन्दै कुँवरले आफूले उत्पादन गर्दै आएको तरकारी र मासु होलसेलमा बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
विदेशमा कमाएको रु ४० लाखले कृषि व्यवसाय शुरु गरेको भन्दै उनले केही ऋण गरेर लगानी गर्दै आए पनि उत्पादन गरेको तरकारी र मासुले बजार पाउँदा खुशी भएको बताए। “माछापालन परीक्षणमै छ, एकै पटक पाँच हजार माछा उत्पादन गर्दा राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने आशामा छु”, कुँवरले भने, “परिवारको राम्रै साथ र सहयोग छ, अवश्य पनि सफल हुनेछु ।” कुँवरले हालसम्म तरकारी र बङ्गुरपालनबाट रु पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानीसमेत गरिसकेका छन् । कुँवरलाई व्यवसायमा श्रीमती अमृता कुँवरले सघाउछन् ।
गाउँमै कृषि व्यवसाय गर्दै आउनुभएका श्रीमानलाई कृषि कर्ममा अभिप्रेरित र सक्दो काममा सघाउदै आएको श्रीमती अमृताले बताए । “उनले विदेशमा पनि कृषि कर्ममा नै सात वर्ष विताए” श्रीमती अमृताले भने, ‘‘जीवन चलाउनलाई आफ्नै पेशा गर्न उत्तम भन्ने लागेर परिवारकै सल्लाहमा व्यावसायिक कृषि पेशा अँगालेका हौँ ।” सानै उमेरमा घर छोडेको छोरा गाउँमै कृषि कर्ममा रमाउँदा सबैले उनलाई उदाहरणीय पात्रको रुपमा लिने गरेको श्रीमती अमृताको भनाई छ । उनले सँगै परिवारको साथमा रहेर कृषि कर्म गर्दा आम्दानीका साथै पारिवारिक रुपमा सन्तुष्टि हुने गरेको बताए ।
न्याय, समानता र समृद्धिका लागि जनयुद्धमा होमिएर पनि २०६५ सालमा रित्तो हात घर फर्कनुभएका कुँवर पुनः सात वर्ष मलेसिया बसाई पछि घर फर्किए । कृषि र मासुमा गलकोट नगरपालिका र बागलुङ जिल्ला नै आत्मनिर्भर हुने गरी ठूलो परिमाणमा आधुनिक खेती प्रणाली विस्तार गर्ने सपना र सोच रहेको उनले बताए । कृषिमा आत्मनिर्भरता खोज्न लागिपरेका युवाहरुलाई आफूले प्रेरित गर्ने खालको वातावरण मिलाएको गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीका अध्यक्ष नेत्रबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । उनले कुँवरजस्तै आफ्नो वडामा भएको आधा दर्जन व्यावसायिक कृषकलाई सक्दो सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् ।
“उनको व्यवसाय शुरुआती चरणमै छ, भर्खरै प्रतिफल दिन थालेको छ”, बुढाथोकीले भने “शुरुमा गाउँ छोडेर पलायन भएका युवाहरु, गाउँमै फर्केर कृषि कर्ममा लाग्नु उदारणीय हो, अनुदान तथा प्राविधिक रुपमा सहयोग गरिरहेका छौँ ।” बुढाथोकीका अनुसार सूर्य कुँवरको फर्मलाई गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतबाट रु तीन लाख ३० हजार, गलकोट नगरपालिकाको तर्फवाट रु दुई लाख ५० हजार र वडा कार्यालयले समेत सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ । ऊर्जाशील युवाले गर्दा नै गलकोट नगरपालिकाले पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको र यसका लागि सहयोग पुग्ने पनि उनले बताए । रासस
आमालाई अमेरिका ल्याएर घुमाउने तुलसीको रहर अमेरिकामै छुट्यो !
Previous articleमहानायक हमालको प्रतुतिमा ‘जातको प्रश्न’ कान्तिपुर टिभीमा
Next articleसुनको भाउले रेकर्ड ब्रेक गर्ने क्रम जारी, तोलाको ९९ हजार !
दुई छोरा पहिराेले पुरिएर मृत्यु,परिवार शोकमा
गोरु काटेर मासु खाएको अभियोगमा तीन पक्राउ
मजदूरको ज्याला १०० बढ्यो : न्यूनतम रु ९०० पाउने